सङ्क्रमण बढ्यो, उपत्यकाका अस्पताल भरिए – Health Post Nepal
२०७८ साउन १९ गते १६:४७
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुने बिरामी पनि ह्वात्तै बढेका छन्। पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई नहुँदा केही दिनयता दिनहुँदा जसो बिरामी बढेका हुन्।
कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर), शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायत संस्थामा बिरामी भर्ना हुने संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
दैनिक सक्रमित बढेपछि कोभिड–१९ उपचारका लागि छुट्याइएका सघन उपचारकक्ष (आइसीयु), हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु), भेन्टिलेटर र साधारण शय्या भरिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. प्रवीण नेपालले अस्पतालका सबै शय्या भरिसकेको बताए।
डा. नेपालका अनुसार १० दिन यतादेखि बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि शय्या भरिएका हुन।
‘हामीले कोरोना बिरामीको उपचारको लागि २ सय बेड छुटएका छौं। आइसियू, भेन्टिलेटर सबै भरिएका छन् भने केही आइसोलेसन बेड मात्र खाली छन्,’ डा. नेपालले भने, ‘ अहिले बिरामी पनि पहिलेका जस्तै श्वास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने समस्या लिएर आउने संख्या बढेको छ।’
उनका अनुसार आइसीयूमा २०, एचडीयूमा ५० र साधारण शय्यामा १३० जना बिरामी रहेका छन्।
अहिले सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। दोस्रो लहर गत चैतबाट शुरु भएको हो ।
दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितलाई ज्वरो आउने, निमोनिया हुने, श्वासप्रश्वासमा समस्या आउनेजस्ता समस्या देखिएको छ । सङ्क्रमणको दोस्रो लहर गत वैशाख अन्तिम सातामा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुला राखेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगरेमा असोज १५ पछि सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिएको समेत दिइसकेको छ।
तत्कालिन कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले विगत दुई हप्तादेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताए । उनले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको, भीडभाड बढेको र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामी बढ्दै गएको बताए।
डा. गौतमका अनुसार अस्पतालमा १०० बिरामी रहेका छन्। तीमध्ये ३५ जना आइसीयू र चार जना भेन्टिलेटर र अन्य एचडीयूमा छन्।
सङ्क्रमित बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अस्पतालले एक हजार शय्या तयारी अवस्थामा राखेको उनको भनाई छ। वीरमा एक सय भेन्टिलेटर सहित दुई सय आइसीयू बेड तयारी अवस्थामा छन्।
डा. गौतमले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अस्पतालमा २० टनको तरल अक्सिजन र दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट जोडिएको जानकारी दिए। यस्तै थप एकवटा अक्सिजनको प्लान्ट जोड्ने तयारीमा छ।
शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले निषेधाज्ञा खुलेसँगै बिरामी बढ्दै गएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले २२ जना आइसीयू, २० भेन्टिलेटर र ३५ जना संक्रमित उपचाररत छन्।
यस्तै, पाटन अस्पतालका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार कूल १५१ बिरामीमध्ये २१ आइसीयूमा र १० भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै विगत २४ घण्टामा पाटन अस्पतालमा २२ सङ्क्रमित भर्ना भएका छन् । पाटनमा ३० आइसीयू, १५ भेन्टिलेटर शय्या रहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आठ हजार ८९५ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । देशभरि १५७ अस्पताल कोभिड–१९ का लागि सूचीकृत गरिएका छन् । ती अस्पतालमा दुई हजार ६०० आइसीयू रहेका र ६३० थप गर्ने प्रक्रियामा छन्। यस्तै ९०० भेन्टिलेटर र दुई हजार ७५ एचडीयू छन्। उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा ३११ आइसीयू र १३९ भेन्टिलेटर र साधारणसँगै एचडीयू दुई हजार ६६ शय्या रहेका छन् ।
देशभरिमा ६९० जना आइसीयु र १७५ भेन्टिलेटर, तीन हजार २२४ जना संस्थागत आइसोलेशन र २८ हजार ४०५ जना होम आइसोलेशनमा छन्।
त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले शय्या भरिन थालेको जानकारी दिए । उनले अहिले १२२ जना सङ्क्रमित बिरामी उपचाररत रहेको बताए। तीमध्ये ९१ जना साधारण शय्यामा, अक्सिजन दिएर आइसीयूमा ११ र भेन्टिलेटरमा १८ र दुई जना आकस्मिक सेवामा उपचार गराइरहेका छन्।
उनले बिरामी आउन थालेकाले अब २२ वटा साधारण शय्या र एक वटा मात्र आइसीयू शय्या खाली रहेका बताए । अस्पतालमा १४५ शय्या कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पाँच एचडीयु र २२ आइसीयू बालबालिकाका लागि छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले भीडभाड बढेकाले सङ्क्रमितसँगै बिरामी पनि बढेको बताउँछन् । ‘अहिले केही दिनयता समाजमा सङ्क्रमण बढेका पाइएको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘ सङ्क्रमितहरु दिनप्रतिदिन बढेका छन्।’
डा. अधिकारीले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न गरे।